ဂရိ moussaka: ရိုးရာစာရွက် | မီးဖိုချောင်ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဂရိ moussaka: ရိုးရာစာရွက်
မာရီယာ vazquez | 05/09/2021 10:00 | အသားချက်ပြုတ်နည်းများ
Moussaka သည် Greek gastronomy ၏ရတနာတစ်ခုဖြစ်သည်မရ။ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု၊ ၎င်းသည် lasagna နှင့်တူသော်လည်းခေါက်ဆွဲအလွှာများကိုခရမ်းသီးအလွှာများဖြင့်အစားထိုးသည်။ မင်းအဲဒါကိုစမ်းကြည့်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့လား။ အခုသင်စျေးကွက်ထဲမှာ aubergines တွေကိုတွေ့နိုင်ပြီ၊ အဲဒါလုပ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။
Moussaka (သို့) Musaka တို့သည်ဤအရာများကိုကြား ဖြတ်၍ ခရမ်းသီးကြော်အလွှာ သိုးသားနှင့်ခရမ်းချဉ်သီး။ အသား၏နောက်ဆုံးအလွှာကိုဖုံးအုပ်ပြီးမီးဖို၌အညိုရောင်ဖျော့သော bechamel ဆော့စ်ဖြင့်ပြီးသည်။ ချက်ပြုတ်နည်းပေါင်းများစွာကိုထည့်မထားပေမယ့်ဒီတခါတော့ချက်ပြုတ်နည်းစာအုပ်တော်တော်များများမှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ Bakery အာလူးတွေကိုအဲဒီ့အလွှာနဲ့ Musaka ကိုသန့်ရှင်းစွာဖြတ်တောက်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။
Musaka လုပ်နေတာကနာရီဝက်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ လိုအပ်သောပြင်ဆင်မှုများစွာရှိသည် ဒီစာရွက်ကိုဖြည့်ဖို့နဲ့သူတို့ကရိုးရှင်းပေမယ့်သူတို့ကိုသင်လုပ်ဖို့ရှိသည်! ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချဖို့ငါ့အကြံပေးချက်ကမင်းအဲဒါကိုထည့်ပြီးတာနဲ့အဲဒါကိုအနည်းဆုံးနှစ်ရက်ခံစားဖို့ Moussaka ဆိုတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုလုပ်ပါ။ သင့် menu ကိုပြီးမြောက်ရန်သင်တစ် ဦး သာလိုလိမ့်မည် အလင်းအချိုပွဲ.
Moussaka (သို့) Musaka သည်ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးအသားလွှာများကိုရောစပ်ထားသောဂရိမူရင်းဟင်းချက်နည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗားရှင်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။
စုစုပေါင်းအချိန်: 50 မီတာ
အာလူး ၂ လုံးကိုအခွံခွာပြီးစင်တီမီတာတစ်ဝက်လောက်လှီးထားပါ
အမဲသားသို့မဟုတ်အမဲသား ၄၅၀ ဂရမ်
1 ကြီးမားကြက်သွန်, minced
အဆိုပါ bechamel သည်
460 ml ။ နို့
အခွံမာသီးတစ် ဦး ဖြစ်တော့
ကျွန်ုပ်တို့သည် aubergines များကိုစင်တီမီတာတစ်ဝက်အချပ်များဖြစ်အောင်လှီးဖြတ်သည် ပြီးတော့သူတို့ကိုစုပ်စက္ကူတစ်ခုပေါ်မှာငါတို့ထားလိုက်တယ်။ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီးရေကိုထုတ်ပစ်ရန်သူတို့ကိုအနားယူပါ။
စဉ်တွင်, အာလူးကိုဒယ်အိုးထဲတွင်ထည့်ပြီးဆီများများနှင့်ကြော်ပါ တင်ဒါမရမချင်း တင်ဒါပြီးတာနဲ့ငါတို့အဲဒါတွေကိုထုတ်ပစ်၊ ထုတ်ယူပြီးအရံထားလိုက်။
ဆီအနည်းငယ်သာပါသောဒယ်အိုးတစ်ခုတည်းတွင် ယခုခရမ်းသီးအချပ်များကိုကြော်ပါ အစုအလိုက် သူတို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါပိုနေတဲ့အဆီတွေကိုထုတ်ပစ်ဖို့သူတို့ကိုစစ်ထုတ်ပြီးအဲဒါတွေထားလိုက်တယ်။
ယင်းနောက်ဒယ်အိုးကိုမပြောင်းလဲဘဲထားပါ ကြက်သွန်နီနှင့်ကြက်သွန်ဖြူကိုထောင်းပါ နှစ်ချို့။ ငါးမိနစ်အကြာတွင်အသားများထည့်ပြီးအရောင်ပြောင်းလာသည်အထိကြော်ပါ။
ထို့နောက် စမုန်ဖြူနှင့်သဘာဝခရမ်းချဉ်သီးတို့ကိုထည့်သည်။ ကောင်းစွာရောမွှေပြီးအဖုံးအုပ်ပြီးမိနစ် ၂၀ ကြာအောင်ချက်ပြုတ်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးကွဲသွားပြီးအသားချက်ပြုတ်ခြင်းပြီးဆုံးသည်။
ထို့နောက် ဝိုင်ထည့်ပြီး ၁၅ မိနစ်ထားပါ ပိုလျှံသောအရည်များသည်အငွေ့ပျံသွားစေသည်။
ဒီအချိန်လေးတွေကိုငါတို့အခွင့်ကောင်းယူတယ် bechamel ပြင်ဆင်ပါမရ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဒယ်အိုးကိုထောပတ်အရည်ပျော်ပြီးအချောင်းအနည်းငယ်နဲ့ရောပြီးမိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်ချက်ပြုတ်မယ့်အမှုန့်ကိုထည့်ပါ။ ထို့နောက်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့် nutmeg အနည်းငယ်တို့ထည့်ပြီးထူသော bchachamel ရရှိသည်အထိနို့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်မည်။
ယခုငါတို့အရာအားလုံးပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်၍၊ ၎င်းကိုခဏသာတပ်ဆင်နိုင်သည် ကျနော်တို့170ºCဖို့မီးဖို preheat ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မီးဖိုနှင့်သင့်တော်သောမှိုကိုဆီသတ်သည် ငါတို့သည်အာလူးကိုခြေရင်း၌ချထားသည်မရ။ ထို့နောက်ခရမ်းသီးအလွှာနှင့်အသားတစ်လွှာကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းကောင်းဖြန့ ်၍ အနည်းငယ်ကြိတ်ပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် aubergines အလွှာနှင့်အသားအလွှာများကိုပြန်လုပ်လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံး ငါတို့က bechamel နဲ့ဖုံးထားတယ် ပြီးလျှင်ဒိန်ခဲနှင့်ဖြန်းပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရင်းအမြစ်ကိုမီးဖို၌ထားခဲ့သည် ၁၅ မိနစ်ခန့် ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မီးဖိုအပူချိန်ကို ၂၀၀ ဒီဂရီအထိမြှင့ ်၍ ၅ မိနစ်ခန့်ချက်ပြုတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဟင်းလျာများ » အသားချက်ပြုတ်နည်းများ » ဂရိ moussaka: ရိုးရာစာရွက်
ဗာဒံသီးမုန့်နှင့်ငှက်ပျောသီး oatmeal ဂျုံယာဂု